Tokko-shaneen Yuniivarsitii Seene!
Date: April 9, 2014Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Finfinnee, 10 Ebla 2014) Mootummaan Itoophiyaa tooftaa “dhimma tokko shanee jedhuun uummata impaayeerittii keessaa goolaa akak jiru gaabsame.
Odeessa gabaasan keenya qindeesse irraa akka hubatamutti, ijaarsi tokko shanee uummata keessatti babal’ate har’a immoo dhaabbilee barnootaa biyyittii keessa jiran keessa seenuun barattoota waliin dhahaa jiraachuun beekkameera.
Akak odeeessa nu dhaqqabeetti, tooftaan tokko shanee kun Ebal 1, 2014 irraa eegalee university Finfinnee keessatti hojii irra oolchuuf yaaliin godhama ajira.
Haata’uutii, akka gabaasaan keenya jedhutti, tooftaa kana barattooti hin fudhanne. “Guutumatti barattoonni didanii jiru,” kan jedhe barataan waggaa sadaffaa maqaan isaa akka hin himamane barbaadu tokko, “caalmaatti muummeen political science and international relations immoo tooftaa kana dura wana dhaabbataniif rakkoolleen gurguddoo irra gahuutti jira,” jedhee jira.
Addatti barattoota Oromoo adda dureen immoo ilma Oromoo waggoota hedduuf mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa turanii gara mana barumsaatti deebi’an irratti hordoffiin akka jabaate illee maddi keenya nuuf gabaasee jira.
Sababa kanaan barataan Oromoo waggaa torbaan booda barnootatti deebi’ee tokko guyyuu waamamee qoratamaa akak jiru kan eere maddi keenya, barataa wagga afraffaa political science and international relations barataa jiruu tokko irra dhiibbaa gahu akka fakkeenyaatti nuuf dhaameera.
Akka dhaamsa kanaatti barataan nageenya isaaf jecha maqaa isaa baasuu dhiifne kun guyyuu dhimmi tokko shanee dallaa dhaabbatichaa seenee eegalee ganamaaf galgalaan president unversitichaa dabalatee qaamoota tikaa wayyaaneen doorsisamaa fi gamaaggamamaa jira.
“Hordoffii fi doorsisa gurguddaa irra gahuun sadarkaa barnoota isaa addaan kutee deemuu irra gahee jira,” kan jedhe odeessi kun dhiibbaa fi doorsiti kamuu jiraatu barattooti tooftaa tokko shanee Yunivarsiitii seene gonkumaa akka hin fudhannee beeksisaniiru.
Previous Previous post: NU SIMATAN SEENEE, ISAANOO NU HIMATAN
Next Next post: Ebla 15, 2014: Guyyaa Goototaa Oromoo